Shiinaha 100 gsm / 160gsm Fiberglass Mesh warshad iyo shirkado | Yuniu
Fibreglass Roving toos ah
Maro adag oo la jarjaray
Fiberglass Irbad Mat
Cajalad Fiberglass ah
Cajalad isku dheji ah
Fibre fiber fiber kaarboonka birta ah
Waxsoosaarka Cufan ee fiilooyinka la jarjaray ee galaaska AR
Heat u adkaysta Glass fiber dunta leh tolmo wanaagsan qu ...
Fiberglass Emulsion e dhalada muraayadda dhalada ah 450
1200Tex 2400Tex Maro adag toos Roving From Shiinaha
Maro adag Roving Maro adag Yarn
Maro adag oo isku dhejisan
Wax soosaarka ballaaran 110g 18x14mesh mesh daaqada albaabka
Mesh Maro adag waa maro adag Maro adag sida substrate ah, anti-emulsion polymer daahan ka dib markii quusin, taas oo uu leeyahay iska caabin wanaagsan alkali, dabacsanaan iyo xoog siligga xoog, waxaa si ballaaran loo isticmaali karaa in nidaamka dhameystirka dahaarka dibadda (EIFS), nidaamka saqafka, marmar, iwm
Shayga Wadarta miisaanka (gsm) Cabbirka mesh (mm) Xiro
Mesh Maro adag 110gsm 4 * 4 leno
Mesh Maro adag 160gsm 6 * 6 leno
1. Xasiloonida kiimikada wanaagsan. Waxay u adkeysataa alkali, aashitada, biyaha, nabaad-guurka sibidhka iyo daxalka kiimikada kale; waxay leedahay xoog wax ku xidha oo leh cusbi oo si fudud loogu milmi karo styrene.
2. Awood sare, modulus sare iyo miisaan fudud.
3. Degganaansho cabbir ka fiican, adag, fidsan, oo aan sahlanayn in la dhimo, qaab-daran iyo booska.
4. Caabbinta saamaynta wanaagsan. (Awoodeeda sare iyo adadag awgood)
5. Mashiinka ka hortagga iyo ka-hortagga cayayaanka
6. Ka-hortagga dabka, ilaalinta kuleylka, dahaadhka codka iyo kuleylka kuleylka.
1) Qalabka xoojinta derbiga (sida mesh fiberglass mesh, GRC wallboard, EPS guddiga dahaarka gidaarka gudaha, guddiga gypsum, iwm)
2) Waxsoosaarka sibidhka oo kor loo qaaday (sida tiirarka Roomaanka, hargabyada iwm).
3) Granite, net mosaic, shabaqa dhabarka marmar.
4) maro xuub biyuhu xireen iyo saqafka oo biyuhu xireen.
5) Xooji maadada qalfoofka alaabada balaastigga ah iyo kuwa caagga ah.
6) Loox dab-damis ah.
7) Dharka hoose ee shaagagga wax lagu shiido.
Xirmo & shixnad
Mesh Fiberglass mesh badanaa waxaa lagu duubaa bacaha polyetylen, ka dibna 4 duub ayaa lagu buuxiyaa sanduuq jiingado ku habboon. Weelka caadiga ah ee 20-cagood ah waxaa lagu buuxin karaa qiyaastii 70,000 m2 oo mesh fiberglass ah, halka weelka 40-cagood ahna lagu buuxin karo qiyaastii 150,000 m2 oo mesh fiberglass ah.
Gadiid: bad ama hawo
Faahfaahinta gaarsiinta: 15-20 maalmood kadib helitaanka lacag bixinta hore
Shirkadeenu waxay leedahay waaxdeena adeegga iibka kadib iibkeenna xirfadleyda gaarka ah, alaabooyinka ayaa ku riyaaqay sharaf sare oo gudaha ah oo caan ku ah suuqa caalamiga sidoo kale. Hadafkeenu waa in aan u adeegno soo iibsiga agabyada isku dhafan ee caalamiga ah, si aan nolosha dadka uga dhigno mid ammaan ah, jawi badan leh. Tan iyo markii la aasaasay 2012, iyadoo kooxda iibka ee kaamil ah gudaha iyo dibaddaba. Waxsoosaarkeenna waxaa loo iibiyey lix iyo siddeetan dal.Waxaan hadda leenahay saamiga suuqa ee Yurub, Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika, Australia, Afrika, Bariga Dhexe iyo Koonfur-Bari Aasiya. Fursad na sii, waxaanuna kugu soo celin doonaa adiga oo qanacsan.Waxaan si daacad ah u rajeyneynaa inaan kula shaqeyno gacmo-qabasho.
Hore: Heat-u-adkaysta Muraayadda Muraayadda Tayada oo tayo sare leh
Xiga: Waxsoosaarka Cufan ee fiilooyinka la jarjaray ee galaaska AR
Heat u adkaysta Glass fiber dunta leh tolmo wanaagsan la ...
Dhismaha A, Zijingguandi, Degmada Qiaodong, Magaalada Xingtai, Gobolka Hebei